Manchester United Oo Guul Ka Gaartay Granada, Iyo Arsenal Oo Bar-baro Lagu Qabtay UEFA Europe League
HomeWararka CiyaarahaManchester United oo guul ka gaartay Granada, iyo Arsenal oo bar-baro lagu qabtay UEFA Europe League
April 9, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalada Kale 0
kooxda Manchester United oo booqasho ugu tagtay Granada ayaa 0-2 uga badisay lugta hore ee wareega 8aad UEFA Europe League oo ka dhacay garoonka Nuevo Los Carmenes.
Xidiga Marcus Rashford ayaa hogaanka u dhiibay Man United qeybta hore daqiiqadii 31aad ee ciyaarta iyadoo lagu kala nastay goolkaasi waxana qeybta danbe ee ciyaarta gool rigoore ah u saxiixay Bruno Fernandes.
Lugta labaad ee labadan kooxood ayaa Khamiista toddobaadka dambe waxay ku wada ciyaari doonaan garoonka Old Trafford,.
Granada ayaa u baahnaandoonta in ugu yaraan ay ku badiso tirada goolasha lagaga badiyey kulanka , si ay kulanka dambe u gaarsiiso rikoodheyaal.
Dhana kale kooxda Arsenal oo garoonkeeda Emirates Stadium kula ciyaartay kooxda Slavia Prague ayaa la kulantay bar-baro 1-1 ah.
labada kooxood ayaa iska dhalin wax gool ah ilaa daqiiqadii 86aad ee ciyaarta markaasi oo kooxda Arsenal u suura gashay in ciyaarta wax ka badasho kadib markii xidiga Nicolas Pepe uu gool u dhaliyay.
Kooxda Slavia Prague ayaana dadaal dheer kadib keentay goolka lagu lahaa kana dhintay ciyaarta bar-baro daqiiqadii 90+4aad ee ciyaarta waxana goolkaasi u dhaliyay Tomas Holes.
Arsenal ayaa lugta xigta booqasho ugu tagidoonta kooxda Slavia Prague.
Kulamada kale ee la ciyaaray Caawa